June 15, 2022 - Nainglinn
ကြားသိရသမျှ June 15, 2022
စံရတီမိုးမြင့် ပြန်ဖျက်သွားတဲ့ အသဲယားစရာ live လေး သေချာကြည်မှသိမယ်
စံရတီမိုးမြင့် ပြန်ဖျက်သွားတဲ့ အသဲယားစရာ live လေး သေချာကြည်မှသိမယ် အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်… ခရက်ဒစ် ဗီဒီယို စံရတီမိုးမွငျ့ ပွနျဖကျြသှားတဲ့ အသဲယားစရာ live လေး သခြောကွညျမှသိမယျ အောကျတှငျ ရုပျသံဖိုငျဖျောပွပေးထားပါတယျ… ခရကျဒဈ ဗီဒီယို စံရတီမိုးမြင့် ပြန်ဖျက်သွားတဲ့ အသဲယားစရာ live လေး သေချာကြည်မှသိမယ် အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်… ခရက်ဒစ် ဗီဒီယို စံရတီမိုးမွငျ့ ပွနျဖကျြသှားတဲ့ အသဲယားစရာ live လေး…
မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) လူထွက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ဒဲ့ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ ဇနီးဟောင်း
မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ) လူထွက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း အပြည့်အစုံကို ဇနီးဟောင်းဖြစ်သူ ဒေါ်ဆက်မီလွင် ကိုယ်တိုင် ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် (၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် နယူးဝပ်ခ်ျ ဂျာနယ်မှ ဖော်ပြခဲ့သည်ကို ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်) (အစ်မနဲ့ဆရာတို့ ဖူးစာဆုံဖြစ်ခဲ့ပုံကို အရင်ဆုံး ပြောပြပေးပါ။) အစ်မအဖေဆုံးပြီးတော့ အစ်မစိတ်ဓာတ် အရမ်းကျနေတဲ့အချိန်မှာ အစ်မအမေက သူ့ကိုကိုးကွယ်တော့ အဖေ့အတွက် ဆွမ်းကပ်ဖို့ကိစ္စစီစဉ်ရင်းနဲ့ စသိကြတာ။ နောက်တော့ သူက စာရေးဆရာဆိုတော့ ကုန်ကြမ်းလိုချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ အစ်မ ဂျာမနီမှာနေခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ သိချင်တယ်ဆိုတာနဲ့…
ဝဋ်ကျွေးတွေရှိရင် … ဒီဘဝနဲ့ကျေပါစေ သားလေးရယ်။မိခင်ဖြစ်သူကိုကယ်ရင်း ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သား
ဝဋ်ကျွေးတွေရှိရင် … ဒီဘဝနဲ့ကျေပါစေ သားလေးရယ်။မိခင်ဖြစ်သူကိုကယ်ရင်း ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သား လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြိုးပြတ်ကျကာ သေဆုံးသွားသည့် သမိန်ထောသိမ်ကုန်းမှ သားအမိနှစ်ဦး၏ နောက်ဆုံးခရီးသို့ သွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်၊ရင်ထဲမိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ ကျွန်တော်မျက်ရည်ဝဲခဲ့ရပါတယ် မြင်ကွင်းတွေကြည့်ပြီ ဆယ်တန်းကျောင်းသားနှင့် ကိုးတန်းကျောင်းသား သားနှစ်ဦးကျန်ရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူများအားအဖက်ဖက်မှ ပံပိုးကူညီသူများအား မိသားစုကိုယ်စားကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ဖျာပုံမြို့နယ် သမိန်ထောသိမ်ကုန်းကျေးရွာတွင်နံက်၃နာရီ၁၅မိနစ်အချိန်ခန့်တွင် ဝီဝီ ဝီဝီ အသံကြားရ၍ နေအိမ်အရှေ့ ထွက်ကြည့်ရာ ဖျာပုံ-ကျုံကဒွန်းသို့ သွယ်တန်းထားသော (၁၂၀၀၀.ဗို့အား)ရှိ ဓာတ်ကြိုး တစ်ချောင်းပျက်ကျသဖြင့် သားအမိနှစ်ဦး ရင်နင့်ဖွယ်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာနံက်…
အထွေအထွေဗဟုသုတ June 15, 2022
မိန်းကလေးတိုင်း ဒဲ့ရွံတဲ့ ယောက်ျား
မိန်းကလေး တစ်ယောက်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ပီး ရန်ဖြစ်သော ယောက်ျား မိန်းကလေး တယောက်အပေါ် အမြဲတမ်း အနိုင်ယူတတ်သော ယောကျာ်း မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ဆဲတတ်၊ အော်တတ်၊ လက်ပါတတ်သော ယောက်ျား မိန်းကလေး တယောက်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို အနိုင်ယူတတ်သော ယောကျာ်း မိန်းမတကာနဲ့ အရောတဝင်၊ မိန်းမတကာကို အပျော်ကြံတတ်တဲ့ ယောကျာ်း ကိုယ့်ကိုကို ဂုဏ်ဖော်၊ အထင်ကြီးပြီး မာန်တက်နေသော ယောကျာ်း ပေးထားတဲ့ ကတိ၊ ပြောထားတဲ့ စကား…
ဇွန်လ ၁၅ရက်မှ ၁၇ရက်နေ့ အထိ စိုက်ပျိုးရေတွေရမယ့်ဒေသများ
15/06/2022 🌧🌧 စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးရွာနိုင်ပြီး မိုးညှင်းခရိုင် ဗန်းမော်ခရိုင်မြစ်ကြီးနားခရိုင် ပူတာအိုခရိုင်ဒေသတွေမှာ မိုးကြီးရေလျှံနိုင်ပါတယ် ISSUE TIME 15/06/2022 at 1:45PM 15/06/2022 🌧🌧🌧🌧🌧ရခိုင်ပြည်နယ် ဧရာဝတီတိုင်းမှ ကြံခင်း မြန်အောင် ပဲခူးတိုင်းမှ ပြည်ခရိုင် တောင်ငူခရိုင်နှင့် နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ရမည်းသင်း ဒေသများတွင်မိုးရွာနိုင်ပါတယ် ISSUED TIME 15/06/2022 at 1:31PM 15/06/2022 🌧🌧🌧🌧🌧 ကလော ပင်းတယ ရွာငံ မြို့ကြီး…
နိုငျငံနရော အနှံ့ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ ကွောကျမကျဖှယျ သဘာဝဘေးအန်တရာယျမြား(ရုပျသံ)
တရုတျနိူငျငံနရောအနှံ့ကွုံတှနေ့သေညျ့ သဘာဝဘေးအန်တရာယျမြား Jiangsu ပွညျနယျမှာ ကောငျးကငျတဈခုလုံမှောငျမိုကျနပွေီး ညတဈညကဲ့သို့ ဖွဈပျေါကာ လပွေငျးမုနျတိုငျးမြားဝငျရိုကျတိုကျခတျခဲ့သညျ…. လပွေငျးမုနျတိုငျးဒဏျကွောငျ့လူနအေဆောကျအဦးရှိ ပစ်စညျးမြားလှငျ့စငျကုနျပွီး ရာသီဥတုဖေါကျပွနျခွငျးရဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ဒဏျကို ခံကွရသညျ…… အခြို့နရောဒသေမြားမှာတော့ ကားလမျးမြားရမြေားဖွငျ့ ပွညျ့နှကျနပွေီးကား အစား လှမြေားကို သာအသုးံပွုကွသညျ…….. 𝓣𝓱𝓮𝓽 𝓜𝓪𝓾𝓷𝓰 တရုတျနိူငျငံနရောအနှံ့ကွုံတှနေ့သေညျ့ သဘာဝဘေးအန်တရာယျမြား Jiangsu ပွညျနယျမှာ ကောငျးကငျတဈခုလုံမှောငျမိုကျနပွေီး ညတဈညကဲ့သို့ ဖွဈပျေါကာ လပွေငျးမုနျတိုငျးမြားဝငျရိုကျတိုကျခတျခဲ့သညျ…. လပွေငျးမုနျတိုငျးဒဏျကွောငျ့လူနအေဆောကျအဦးရှိ ပစ်စညျးမြားလှငျ့စငျကုနျပွီး ရာသီဥတုဖေါကျပွနျခွငျးရဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ဒဏျကို ခံကွရသညျ…… အခြို့နရောဒသေမြားမှာတော့…
ကိုယျ့နိုငျငံတှငျးမှာ ဒီလိုပှဲတျောမြိုးရှိတာ ခုမှပဲသိရတော့တယျ…ဗဟုသုတအနနေဲ့ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ…
တမူထူးခြားတဲ့ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်က အမျိုးအဆွေရွာလည်ပွဲ ရခိုင်ပြည်နယ် ရမ်းဗြဲမြို့ ကုန်ဘောင်(၁) စံပြကျေးရွာမှာ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်လာကြတဲ့ အမျိုးအဆွေ ရွာလည်ပွဲတော် ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက ပွဲတော်တွေထဲမှာ အထူးခြားဆုံးပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပွဲတော်တွင် ကလေးတွေက လူကြီးပုံစံ၊ လူကြီးတွေက ကလေးပုံစံ၊ ယောကျာ်းတွေက မိန်းကလေးပုံစံ၊ မိန်းကလေးတွေက ယောကျာ်းလေးပုံစံနဲ့ အဝတ်အစားဒီဇိုင်းမျိုးစုံကို ဟာသမြောက်အောင်ဝတ်ဆင်ကာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်ချစ်ခင်ခင် စည်းစည်းလုံးလုံးဖြစ်အောင် တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ပွဲတော်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။…
အရှကျကို အသကျနဲ့ လဲသှားတဲ့ လှိုငျသာယာမှမိနျးကလေးတဈဦး ဖွဈရပျမှနျ
အရှကျကို အသကျနဲ့ လဲသှားတဲ့ လှိုငျသာယာမှမိနျးကလေးတဈဦး ဖွဈရပျမှနျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊ လှိုငျသာယာမွို့၊ (၁၉)ရပျကှကျ၊ ဥက်ကာလမျး၊ အပြိုကွီးအဆောငျ၌ အသကျ၂၄နှဈခနျ့ မိနျးကလေးတဈဦး ဆှဲကွိုးခြ သဆေုံးမှု ဖွဈပှားကွောငျး စုံစမျးသိရှိရပါသညျ။ “မဥမ်မာရီ အသကျ ၂၄နှဈ၊ ရခိုငျပွညျနယျ၊ စဈတှမွေို့နယျ၊ ကွှီတဲ့ကြေးရှာနေ(ခတ်ေတ-လှိုငျသာယာ စကျရုံ၌ အလုပျလုပျကိုငျနသေူ)နှငျ့ မောငျသိနျးနိုငျ၊ရခိုငျပွညျနယျ၊စဈတှမွေို့နယျ၊ ညိုရောငျကြေးရှာနေ(ခတ်ေတ-လှိုငျသာယာ၌ အလုပျလုပျကိုငျနသေူ) သူတို့နှဈယောကျတှငျ ရညျးစားဖွဈခဲ့ကွ၍ တဈယောကျကိုတဈယောကျယုံ ကွညျမှုဖွငျ့ အတူတူအိပျခဲ့ကွပွီး။ မဥမ်မာရီတှငျ လပိုငျး အနညျးငယျကွာလာသညျ့အခါ…
မေမေ ပြောပြတဲ့ ပျိုမေ တို့အကြိုက် သနပ်ခါး ကျောက်ပျဉ် သနပ်ခါး ကျောက်ပြင် အသစ်ဆိုရေလေးဆေးလိုက်ပြီးသနပ်ခါး တုံးသွေးထည့်လိုက်တာပဲအဲသလိုလုပ်လို့မရပါဘူး ကျောက်သား အစစ်ကိုထွင်းထားတဲ့ ကျောက်ပျဉ် ဖြစ်ဖြစ် ဘိလပ်မြေ လိုမျိုးကိုပုံပြု့ထားတဲ့ကျောက်ပျဉ်ဖြစ်ဖြစ်ပထမဦးဆုံးအသုံးမပြု့ခင်မှာဝယ်လာတဲ့ကျောက်ပျဉ် ကိုရေစင်စင်ဆေးပြီး ကျောက်ပျဉ် ကိုရေပုန်းထဲကိုထည့်ပြီးရေနဲ့တစ်ညစိမ်ထားပါနောက်တစ်ရက်မှာနနွန်းတက်နဲ့ဆီ+ဆားနဲ့ကို သွေးပြီးတစ်နေကုန်နေလှမ်းထားရပါတယ် ဆီခြောက်တော့မှသနပ်ခါးကျောက်ပျဉ်ကိုရေထပ်ဆေးပြီးမှမိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ သနပ်ခါးတုံး ကိုသွေးရပါတယ် ထွက်လာတဲ့ သနပ်ခါး ကလေးတွေကညက်နေပြီးတနေကုန်ပါးပြင်ပေါ်အရာထင်နေပါတယ်တဲ့ကဲ ကျောက်ပျဉ်အ သစ်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြု့ရသလဲဆိုတာသိသွားပြီပေါ့ မေမေပြောပြတယ် ကျောက်ပျဉ် ပေါ်သနပ်ခါး သွေးတာ လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုလုပ်တာနဲ့တူတူပဲတဲ့ ဒါပေမဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ်ချသွေးရတာမဟုတ်ပဲမိမိခါးအလည်လောက်…
အချစ်ရေး June 15, 2022
အခဈြရေးကံကွမ်မာ ကောငျးမကောငျး သိနိုငျဖို့
အခဈြရေးကံကွမ်မာ ကောငျးမကောငျး သိနိုငျဖို့ ဒီနှဈထဲမှာ အခဈြရေးပွလေညျမလား၊ ခဈြသူနဲ့ အဆငျပွမေလား၊ ရညျရှယျထားတဲ့သူနဲ့ လကျထပျဖွဈမလား ခဈြသူအသဈတှေ့ဦးမလား ခဈြသူနဲ့ ကှဲမလားဆိုတာတှေ မသိခငျြဘူးလား အခဈြရေးကံကွမ်မာ ကောငျးမကောငျး သိနိုငျဖို့- ဒီနှဈထဲမှာ အခဈြရေးပွလေညျမလား၊ ခဈြသူနဲ့ အဆငျပွမေလား၊ ရညျရှယျထားတဲ့သူနဲ့ လကျထပျဖွဈမလား ခဈြသူအသဈတှေ့ဦးမလား ခဈြသူနဲ့ ကှဲမလားဆိုတာတှေ မသိခငျြဘူးလား အဲဒီလိုနှလုံးသားရေးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ပွဿနာလေးတှေ ကွိုတငျ သိခငျြသူတှအေတှကျ သကျရောကျ ဟောကိနျးလေးတှကေို ပွောပွပါ့မယျ တဈခုတော့ရှိတယျဗြ။ လကျဆနျးဗဒေငျ…